Maareynta Khatarta | Martech Zone
Khamiis, Juun 28, 2005 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Waxaa jiray dadyow waddanka oo dhan oo neefta ka qaaday markay arkeen daahfurka Shuttle si guul leh loo bilaabay. Waxaa jira kuwa aaminsan in balaayiin doolar oo lagu kharash gareeyay barnaamijka hawada sare ay tahay uun qasaare lacageed. Waan kari waayey inbadan. Sida bilowgan ugu dambeeya, dejinta yoolal aan macquul aheyn in la gaaro waa waxa nagu kicinaya hal-abuurnimada iyo horumarka. Barnaamijka booska waa mid ka mid ah barnaamijyada sidaas sameeya. Culeyska weyn waa maaraynta iyo qiimeynta halista.
Shirkadaha dawooyinka waa inay sameeyaan. Waxay maareeyaan inay khatar geliyaan nolosha dadka si loo badbaadiyo nolosha dadka. (Qeyb weyn oo ku saabsan Sharciga & Amarka xalay) Ganacsatada gawaarida ayaa sameeya. Cadillac waxay qatar galisay wax walba iyadoo si xagjir ah dib u qaabayn ugu sameysay dhamaan noocyadooda moodellada ah. Qiyaas hadaan naqshadda si wanaagsan loo soo dhaweyn?! Gillette iyo mandiil Mach3. Telefishinnada Sharp iyo LCD.
Dabcan, kuwani waa guulaha. Waxa kale oo jira guuldarrooyinka!
Waxaan aaminsanahay in jawaabta guusha ama guuldarada aysan ku xirneyn hadii ay jirto qatar iyo in kale. Haddii aysan jirin wax khatar ah, waxay u badan tahay inay ku cuni doonaan dadkaas oo HALIS u noqon doona. Awoodda ururkaagu u leeyahay cabbiraadda iyo falanqaynta halista iyo waliba rabitaanka uu u leeyahay inuu halista qaado ayaa fure u ah guushiisa.
Tags: maaraynta halistakhatartamaaraynta khatarta
Furan = Kobaca
Kayar = Inbadan